Haacaaluu Hundeessaa: ‘Oromoom kadhatee jiraachuufi bulchuu hinqabaatu’ – attacked again |
Home Afaan Oromoo Haacaaluu Hundeessaa: ‘Oromoom kadhatee jiraachuufi bulchuu hinqabaatu’ – attacked again
Haacaaluu Hundeessaa: ‘Oromoom kadhatee jiraachuufi bulchuu hinqabaatu’ – attacked again
Haacaaluu Hundeessaa: ‘Oromoom kadhatee jiraachuufi bulchuu hinqabaatu’
(BBC Afaan Oromoo) –Tibbana viidiyoo fi odeeffannoon Weellisaa Hacaaluu Hundeessaa magaala Finfinneetti reebichaaf saaxilame jedhu tokko miidiyaa hawaasummaarra naanna’aa jira.
BBC Afaan Oromoos dubbii kan qulqulleefachuuf Wallisaa Haacaalu Hundeessaa dubbisuun kan asiin gadii kana qindeesseera.
Finfinnee keessatti warri ‘Namoonni hammuma na arga natti bu’uun anaaf waan haaraa miti. Irra deddeebiidhaan kan namuudachaa turedha jedha wallisaa Hacaaluu Hundeessaa.
“Taateen miilanaa kunis Irreecha Harsadii barii gaafa Wixataa naannoo Waajjira Gamtaa Afrikaa irraa jalqabanii konkolaataan na duuba deemanii na arrabsaatii naannoo addabaabayii Meeksikootti hokkora natti kaasani” jedheera mudannoo tibbanna Finfinneetti isa mudate ilaalchise.
Waan isaan jedhanii na abaaran irra deebi’uun deebisee of arrabsuu ta’a kan jedhu Hacaaluun, waan miira keessa isa nagalchu itti dubbachaa akka turan dubbata.
Yeroo sanatti hiriyaasaa Guddisaa Dheeressaa waliin akka turee fi kan konkolaataan isa hordofaa turan namoota afur ta’uu hima.
“Jarri afur nuti lama buuneetuma dubbisna jenneeti garasaanii deemne.
Maal gootaree yoo waa nama gootes rakkisaadha, callistee bira darbuuf ammoo jechi afaan isaanitii bahu nama hin dandeessisu ture” jechuun attamii miira keessa galchanii booda himachuuf qophaa’uun hordofaa akka turan hima Hacaaluun.
Boodas Poolisoonni dhufanii akka adda baasan kan himu Haacaaluun, miidhaan tokkollee narra hin geenye jedheera.
Ani saba kiyyaaf hanga wareegama lubbuuttin yaada – Haacaaluu Hundeessaa
Hacaaluun simannaa Obbo Isaayyaas irratti ‘ni geerara’
‘Jaagamaa Badhaaneefaa nafaana karchallee Amboo ture’ Hacaaluu
“Maal eessaa namatti buuti, arrabarra jira wanti hundumtuu. Natti hin buune. Anumatu seerattan dhiheessa jedhee humnaan itti deeme. Rakkoonsaa immoo gaafa ati miira keessa galtee itti dhaqxemmoo sikadhatu nama nagaa sitti ta’uu barbaadu,” jedha.
Namootni ‘hokkora’ itti kaasan kunneen, ‘abbaa dabaree’ nuun jechaa turan. Kana hundumaa bilisummaa hanga ittiin nama arrabsanii kana Dr. Abiyyitu kenneefi jedha.
“Finfinnee keessatti duraan nama Afaan Tigriffaa haasa’uu yoo argan warra fincaan itti dhufutu, amma garuu Oromoon yoo aangoo qabate kan isaan jalqaba eegan dabaree Oromoo kanattis Oromoo siqiqne jiraanna jedhanii waan eeganiif, Dr. Abiyyi akki itti dhufe akka isaan eegan waan hin taaneef Oromoof kabaja akka dhaban godhe,” jedha Haacaaluun.
“Ishee mudaa qabdus kaanis ni ida’amna kan jedhe Abiyyi malee Haacaaluu miti. Ani warra akkasii faana hidhata hin qabu,”
”Ani nama hin tuqu nan kabaja” kan jedhu Haacaaluun, ”mirga kiyya kabachiisuuf garuu eenyurraayyuu heeyyama hin gaafadhu. Salphoon gaafa soqolatte soqolaan gargaara malee waanan ishiidhaa godhu hin qabu,” jedha.
Dhumarratti erga waajjira poolisii naannoo Lagahaar geeffamaniin booda jarrichis balleessaa isaanii amanuus himeera. Ji’a tokko keessatti yeroo lama hokkora akkanaa narratti kaafameeras jedhe.
Gochi akkanaa kuni artistootarratti kan tahaa jiru nuti fuula uummataa dura waan jirruuf tuttuqanii uummata miira keessa galchuufi jedha.
“Ka’umsi waan kanaa hundeensaa jibba Ormoodhaaf qabaniin. Jibbiinsa isaanii kanammoo akka fuulleetti baafatan kan godhe laafina mootummaati. Warri akkanaa kuni osoo ushururuun irraa dhaabbatee torban tokkotti seera eegdee jiraatti” jedha.
Gochi akkanaa kuni akka itti hin fufneef mootummaan warra akkanaa kana akeekkachiisee seera qabsiisuu baannaan sababa Kanaan waan uumamuuf jiru hagana jechuu hin danda’us jedhe.
“Wanti kuni uummata bira qaqqabnaan hamaadha. Uummanni keenya nurratti hin dhiisu. Waan barbaachisaa ta’e hunda ni godha. Garuu nutis mee har’a irra boru jenneetuma eeggachaa jirra malee wanticha gabaabumatti akka fala argatu gochuun inuma dandahama” jedha.
”Ce’umsatu gufata, hammachuu qabna inni jedhamus daangaa itti keenyee deemuu barbaachisaa ta’a” jedha Haacaaluu.
“Hammachuuf jennee yoo ishiin mangaagaa jala nu dhiitte mataadhaan gadi gadhiisna malee hammachuun maalinni. Oromoon biyya abbaa isaa irratti kadhatee jiraachuu hin qabu. Oromoon kadhatees bulchuu hin qabu. Isaanis osoo carra argatanii kadhatanii hin bulchan” jedha.
Mootummaan seera kabachiisuuf dirqamasaa bahu baannaan nutis waan dandeenyuun ofirraa ittisaa deemuuf dirqama qabna jechuun BBCtti hime.
Previous article$26 a month: Ethiopians are being paid world’s lowest wages to make your Calvin Kleins
Next articleSeife Nebebal Radio – Interview with Jemal Ibrahim on Irreecha affairs
GMN: Dhimmaa Oromoo walii galaa irratti marii gabaabaa! Amajjii 25, 2021
Renaissance of Amhara Hegemony
Falmataa - January 26, 2021 0